Ukutyelela iSri Lanka: ngaba abakhenkethi baseSpain bafuna iVisa? | Uhambo olupheleleyo
U-Emilio Garcia | | Indiya
ISri Lanka lelinye lamazwe athe afumana ukubaluleka ngakumbi kule minyaka yakutsha nje njengendawo yokhenketho. Ilizwe, elaziwa ngokuba "yinyembezi yaseIndiya" ngenxa yendawo yalo, liyakwazi ukwenza nawuphi na umkhenkethi ochitha iintsuku ezimbalwa kwintsimi yakhe ukuba athande. Yabo imimandla yeentaba ezaliswe ngamabala eti okanye izixeko zayo ezinomtsalane zamakoloniyali zezinye zezinto zayo ezinomtsalane.
Kodwa eli lizwe likwaneentlobo ngeentlobo zezilwanyana ezihlala endle kwimiyezo yalo, njengeendlovu namahlosi. Imifanekiso eqingqiweyo kaBuddha eqingqwe ematyeni kunye namanxweme asendle asemazantsi alungele ukusefa zezinye zezinto ezihenda inani elandayo labakhenkethi minyaka le.
1 Kodwa ngaba abakhenkethi baseSpain bafuna iVisa yokungena eSri Lanka?
2 Inkqubo eyimfuneko yokungena kweli lizwe
Kodwa ngaba abakhenkethi baseSpain bafuna iVisa yokungena eSri Lanka?
Ukutyelela iSri Lanka, nokuba kungenxa yezizathu zabakhenkethi, ngenxa yezizathu zoshishino okanye ukuhamba kwelinye ilizwe, kuyimfuneko ukufumana I-visa yaseSri Lanka oko kukuvumela ukuba ungene kwaye uchithe ixesha elizweni ngokusemthethweni. Abemi baseSpain Kufuneka ufake isicelo seVisa ngaphambi kokuba uye eSri Lanka, ngaphezu kokukwazi ukubonisa ezinye iimfuno ezifunwa lilizwe kubahambi bamazwe ngamazwe.
I-visa yokungena eSri Lanka, ekwabizwa ngokuba yi-ETA, iyafuneka kubo bonke abahambi. Lugunyaziso olusemthethweni lokungena kwelinye ilizwe kwaye ungalufumana emva kokubhukisha iinqwelomoya, kodwa rhoqo phambi kokungena elizweni. Kufuneka kwakhona ubonise igosa lokufudukela kwelinye ilizwe ukuba unobungqina benkxaso yemali yokuhlala kweli lizwe, kwaye ubonise incwadana yokundwendwela esemthethweni ubuncinane iinyanga ezi-6 ukususela ekungeneni kwakho kweli lizwe.
Ezinye iimfuno zabo bangena eSri Lanka, mhlawumbi ngenxa yokhenketho okanye ngezizathu zoshishinoZiyi-reservation yendiza yokubuyela kwelinye ilizwe okanye uhlawule i-visa ekhethekileyo yoshishino ukuba ungena kwilizwe ngeshishini, umsebenzi okanye ukuthenga kunye nokuthengiswa kweemveliso kunye / okanye iinkonzo.
Inkqubo eyimfuneko yokungena kweli lizwe
Abantu baseSpain abaceba ukutyelela eSri Lanka kufuneka bafumane i-ETA yabo eSri Lanka ngaphambi kokungena kweli lizwe. Ungayifumana ngokuya kuyicela ngokwakho kumzi wozakuzo waseSri Lankan eSpain, kodwa eyona nto icetyiswayo kukwenza oko nge-Intanethi. Kwaye kungenxa yokuba ilizwe laseAsia ngoku livumela inkqubo ukuba iqhutywe kwi-intanethi ukuze kube lula ukufikelela kukhenketho kwilizwe.
Kuyimfuneko ukulandela amanyathelo ukugcwalisa ifomu, apho unokufuna iingcebiso zobungcali. Ngokumalunga neendleko zokufumana i-ETA eSri Lanka, Kuqikelelwa malunga nee-euro ezingama-45 ngokwedatha yamva nje enikezwe yiSri Lanka, Nangona inokwahluka ngexesha ulungiselela uhambo lwakho. Iindleko ze-ETA eSri Lanka ngezizathu zoshishino zinokuba neendleko ezongezelelweyo xa kuthelekiswa ne-ETA ngenxa yezizathu zokhenketho.
Into eqhelekileyo kulolu hlobo lwenkqubo kukufumana impendulo esemthethweni ngejelo lonxibelelwano, njenge-imeyile. Le imeyile idla ngokufunyanwa phakathi kweentsuku ezisi-7, ngoko ke kubalulekile ukwenza oko kwangethuba ngaphambi komhla wokungena kweli lizwe ukuze uqiniseke ukuba unayo xa kufika ixesha. Ngethamsanqa kukho ii-arhente kunye neenkampani ezinikezela ukwenza olu hlobo lwenkqubo kubahambi ukuze bangabi naxhala lanto.
Ukuba uceba ukungena eSri Lanka ngeentsuku ezingaphantsi kwe-7 kwaye ufuna isigunyaziso sakho se-ETA ngokukhawuleza, sinokuqhutyelwa phambili kodwa kufuneka bonisa kwisicelo ukuba le yinkqubo engxamisekileyo kwaye oku kunokuba neendleko ezongezelelweyo, kuba kufuneka baqhube isicelo se-ETA ngexesha elingaphantsi kakhulu kunesiqhelo.
Njengoko kunokubonwa, kuyafuneka ukuba abantu baseSpain bafake isicelo seVisa ukuze bakwazi ukungena eSri Lanka ngaso nasiphi na isizathu sokuhamba, nokuba kukhenketho okanye ishishini. Inkqubo eyimfuneko eyenza kube lula ukuhamba kwabakhenkethi xa befika kwisikhululo seenqwelomoya kwaye evumela ilizwe ukuba libe nolawulo olukhulu kwabo bangena kumhlaba walo kwaye bawele imida yalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukutyelela iSri Lanka: ngaba abakhenkethi baseSpain bafuna iVisa?
Izinto ezi-3 ekufuneka uzithathe ewe okanye ewe kuhambo